Uncategorized | Nepstok
विदेशबाट फर्कनेलाई क्वा’रेन्टिन राख्न ११० होटेल तोकिए, खर्च आँफै व्यहोर्नुपर्ने ।(होटल सूचीसहित)
July 6, 2021 NepstokLeaveaComment on विदेशबाट फर्कनेलाई क्वा’रेन्टिन राख्न ११० होटेल तोकिए, खर्च आँफै व्यहोर्नुपर्ने ।(होटल सूचीसहित)
काठमाडौं : सरकारले विदेशबाट फर्कने यात्रुलाई क्वा’रेन्टिन राख्नका लागि कुल ११० वटा होटेललाई अनुमति दिएको छ । पर्यटन विभागमा दर्ता भएका २७ र बागमती प्रदेश उपत्यका पर्यटन कार्यालयमा दर्ता भएका ८३ गरि कुल ११० होटेल क्वा’रेन्टिनका रुपमा तोकिएको विभागले जनाएको छ । विभागको होटेल शाखाले आइतबार को’भिड १९ सं’कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)मा होटेलको सूची बुझाएको […]
July 3, 2021 July 3, 2021 NepstokLeaveaComment on आज देखि लागू हुनेगरी बैङ्कहरुमा लाग्ने भयो यस्तो अनौठो नियम?एकपटक अवस्य पढ्नुहोस?
July 1, 2021 NepstokLeaveaComment on ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति ?
काठमाडौं – बिहिबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । बुधबार तोलामा ६ सय रुपैयाले घटेको सुनको मूल्य आज तोलामा ८ सय रुपैयाँले बढेको हो । बुधबार प्रतितोला ९० हजार रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज बढेर तोलाको ९० हजार ८ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । त्यस्तै आज […]
पतिसँग अलग बस्दै आएकी नायिका गर्भवती भएपछि हँगामा १६ असार २०७८, बुधबार ०९:११ नायिका एवम् तृणमूल कांग्रेसकी सांसद नुसरत जहां गर्भवती भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । बधाई दिनुको साटो नुसरत गर्भवती भएको खबरमा प्रश्न उठिरहेको छ । वास्तवमा पछिल्लो केही महिनादेखि नुसरत र उनका श्रीमान् निखिल जैनको सम्बन्धमा खटपट भएको चर्चा थियो । खबर […]
काठमाडौं । बीबीसीको ‘टप १०० प्रभाशाली महिला’को सूचीमा परेकी सपना रोका मगरसहित ‘हाम्रो टिम नेपाल’का अभियन्ताहरु पक्राउपछि रिहा भएका छन् । अनामनगरमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग समन्वय नगरी टहरा बनाएको आरोपमा सोमबार पक्राउ परेका उनीहरुलाई रिहा गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले अभियन्ताले निषेधाज्ञामा मजदुरलाई खाना खुवाउन बनाएको टहरा पनि हटाइदिएको छ । यस विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख […]
June 26, 2021 NepstokLeaveaComment on भर्खरै आयो यस्तो ड’रलाग्दो खबर ! मन द’ह्रो बनाएर हेर्नुहोला !
काठमाडौँ । छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको संक्रमण फेरी बढेको देखिएको छ । भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो अपडेट अनुसार २४ घण्टामा कोरोनाबाट २१२ जनाको मृ’त्यु भएको छ । भारतमा अहिले कुल मृ’त्यु हुनेको संख्या एक लाख ५९ हजार नाघेको छ । भारतमा अहिलेसम्म मृ’त्यु हुनेको संख्या एक लाख ५९ हजार ९६७ पुगेको छ । *** […]
June 25, 2021 NepstokLeaveaComment on दाँतमा प्वाल परेको वा किरा लागेको छ ? यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्
दाँतको साइनो अनुहारको सौन्दर्यसँग मात्र छैन, स्वास्थ्यसँग पनि छ । चिकित्सकहरु भन्छन् नि, ‘राम्ररी चपाएर मात्र खानेकुरा निल्नुपर्छ, नभए अपच हुन्छ ।’ चपाउनका लागि दाँतको भूमिका हुन्छ । तर, दाँत नै सडिएको, भाँचिएको वा किरा परेको छ भने ? खानेकुरा टुक्राउन र पचाउनमा केही समस्या पक्कै हुन्छ । त्यसैले दाँतको स्वास्थ्यलाई निकै ध्यान दिनुपर्छ । […]
June 24, 2021 NepstokLeaveaComment on म सँग अस्ट्रेलिया 🇦🇺 जानको लागि केटा चाहियो ! इच्छा हुनेले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला ! पूरा बिवरण हेर्नुहोस
विज्ञापन:-म साधारणा लेखपढ भएको एउटा गाउको केटी हु ।मेरो घर पूर्वको दमकमा पर्दछ । हाल म काठमाणडौ मा बसोबास गरेर म काठमाणडौमा पढदैछु बेचलर रनिङमा छु । मेरो पढाइको विषय मेनेजमन्ट विषयमा पढछु त्यस कारण जापानजानको लागी मैले लगभग सम्पुर्ण तयारी गरी सके त्यस कारण मैले यो सोचेकी म त पढन जाने हो । मेरो […]
चिसो मौसममा रुघा, खोकी र दमले धेरैलाई तनावमा पारेको हुन्छ । यसैकारण गुजरातको सूरतमा काम गर्ने डा. दिक्षा भावसार रुघा, खोकी र दम भगाउनका लागि अमलालाई रामबाण उपचार मान्छिन् । डा. दीक्षा एक आयुर्वेदिक डाक्टर हुन् । उनका अनुसार चिसो मौसममा रुघा, खोकी र दमको समस्या हुनेहरुले अमलालाई कुनै पनि रुपमा खान सक्छन् । डा. […]
June 19, 2021 NepstokLeaveaComment on सपनामा सर्प देखेको शुभ कि अशुभ ? यस्तो भन्छ धर्मशास्त्र
सपना हामी निदाएको बेला बन्द आँखाले मात्र देख्न सक्दछौँ । बन्द आँखाले देखेका सपनाहरु कति पुरा हुन्छन् भने कति अपुरा हुने गर्दछन् । तर सपनामा सर्प देख्नु शुभ वा अशुभ के हो त रु आज हामी तपाईलाई यसबारेमा जानकारी दिनेछौँ । स्वप्नशास्त्रका अनुसार सपनामा सर्प देख्नुको फल शुभ र अशुभ दुबै हुन्छ । स्वप्नमा सर्प […]